Wasaarada howlaha guud ee dowlada federaalka Soomaaliya oo sheegtay dhawaan in ay bilaabayso dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasaarada howlaha guud ee dowlada federaalka Soomaaliya oo sheegtay dhawaan in ay bilaabayso dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka
August 2, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Wasiirka howlaha guud ee dowlada federaalka Soomaaliya Injineer Saalax Shiikh Cusmaan (dhexda). Sawirka: Sonna.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasaarada howlaha guud ee dowlada federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay maanta oo Talaado ah in ay qorshaynayso in dib loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida ugu dhaqsaha badan.
Wasiirka howlaha guud ee dowlada federaalka Soomaaliya Injineer Saalax Shiikh Cusmaan ayaa sheegay in ay qorshaynayaan in ay bilaabaan barnaamijka dib u dhiska kaabayaasha dalka.
“Waxaanu bilaabaynaa dib u dayactirka buundooyinka, wadooyinka iyo dekadaha waa weyn ee dalka sida ugu dhaqsashada badan, kuwaasoo burburay intii lagu guda jiray dagaalada sokeeye, waa mashaariic waxtar leh oo loo baahanyahay.” Ayuu yiri wasiir Saalax oo ka hadlayay munaasabad lagu qabtay Muqdisho.
Kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka ayaa ku burburay dagaalada sokeeye ee dalka ka dhacay, dowlada federaalka Soomaaliya oo caalamka taageero ayaa wali la dagaalamaysa maleeshiyada al-Shabaab, dowlada ayaa dadaal ugu jirta soo celinta amaanka iyo haayadihii dowliga ahaa ee dalka.